Ama-Proteas esifazane afuna ukuqeda ngamandla
Ama-Momentum Proteas angeke akwazi ukunqoba i-Cricket South Africa (CSA) Women’s T20 series, kodwa ukapteni u-Dané van Niekerk uthi iqembu lakhe lizimisele ngokuqeda i-series yemidlalo emihlanu bedlala ne-India ngendlela enhle kumdlalo wokugcina ngoMgqibelo e-PPC Newlands e-Cape Town.
Umdlalo odlulile e-Centurion waqedwa imvula emuva kokuthi i-South Africa ibibukeka sengathi izohlelela izivakashi umphumela omkhulu, kodwa ukapteni uthi iqembu lakhe likhetha ukuthatha okuhle kumdlalo, kunokuthi bacabange ukuthi “ukube”.
“Okokuqala, bekuphoxa (ukuthi umdlalo uqedwe imvula), sizwe sengathi umdlandla ubunathi, kodwa kukhulu esikudlalelayo kusasa. Asifuna ukuhlulwa kwenye i-series, ngakho sizohamba futhi sidlale ikhilikithi enhle esaziyo ukuthi singayidlala ebesiyikhombisa futhi sithemba ukuthi singabanika umdlalo omuhle ababukeli,” esho ephawula.
Iqembu lasekhaya, elingemuva ngo-2-1 kwi-series likhombise ukudlala kahle ngokushaya emuva kokuthi i-India iqale yanqoba imidlalo yokuqala embili ngama-wicket ayisikhombisa nayisishagalolunye ngokulandelana e-Potchefstroom nase-East London. Ama-wicket amahlanu athathwe u-Shabnim Ismail, nosondele ku-50 (41) u-Sune Luus kanye nokushaya kahle u-Chloe Tryon (34 from 15 balls) kubone i-South Africa ibuya kumdlalo wesithathu e-Bidvest Wanderers, kodwa imvula yangoLwesithathu inqume amaphupho abo okunqoba i-series emuva kokuthi u-Van Niekerk (55) no-Lizelle Lee (58*) beshaye o-50 ngasekuqaleni i-India ibe ithe abashaye kuqala.
Ngaphandle kwemiphumela, u-Van Niekerk ujabulile ngendlela iqembu lakhe eliyidlale ngayo ikhilikithi yabo kanye nendlela ababuye ngayo emuva kokuhlulwa kabuhlungu futhi banqaba ukukhishwa ngokuphelele kwi-series.
“Kube i-tour enzima kudlalwa ne-India, hayi le-series kuphela, kodwa nama-ODI. Kodwa ngesikhathi libuya, libuye ngamandla, ngiyaziqhenya ngalokho,” esho eqhubeka. “Kuyasho ukuthi uma ungacabangi ngomphumela kuphela futhi uvele udlale umdlalo wakho futhi ugxile kulokhu okulula, lokhu okunye, ikakhulukazi imphumela kuzozihlanganisela. Amantombazane angijabulisile ngalapho, ziyangena izifundo, izinhlelo zomdlalo ziyasebenza, kuthathe isikhathi nje ukuthi inhlanganiso yethu ihlangane futhi, sisazokusebenza lokho njengoba i-World T20 ezemuva kwezingqondo zethu.”
Kuyela kumdlalo wakusasa wokugcina, ukapteni uyalesekela iqembu lakhe ukuthi linqobe. Ukhulume ngamathalente akhona eqenjini lakhe;
“Besisebenza kanzima ngokukhetha ukushaya kwethu kuma-nets, ukuthi sifuna ukwenza kanjani, nini futhi nakanjani futhi kuhle ukubona kuhlangana. Kuhle kumdlalo wabesifazane uma u-Lizelle Lee no-Chloe Tryon uma bedlala kahle. Abadlali ababili abashaya kakhulu kwikhilikithi yabesifazane okwamanje futhi kukhulu kwikhilikithi yabesifazane ukubabona benza kahle kangaka.”
“Ngincika kulokho, ngineqembu eliphosa kahle kakhulu emhlabeni, uyazi, abantu bangakuphika lokho, kodwa ngikholelwa kulokho mina. Bakukhombisile lokho. Sinabadlali abaningi kuma-ODI Rankings abaphosayo futhi lokho kuyazikhulumela. Ngingakhetha nomaphi futhi besisebenza kanzima. Manje okusele ukuthi siyiqede kahle le-series ngendlela ezokwenza thina kanye nezwe lethu liziqhenye futhi ngiyazi ukuthi bonke abadlali abakhona eqenjini bafuna ukwenza lokho.”
Umdlalo e-Newlands uzoqala ngo-13:00 (SAST) futhi uzovezwa ku-SuperSport 2 uphinde usakazwe ku-Radio 2000. Ukuhamba komdlalo kuzotholakala kwi-Cricket South Africa Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
Imvula inqoba umdlalo wesine we-Women’s T20 e-Centurion Ama-Proteas esifazane alindele ukulinganisa i-T20 series Ishlanu sika-Ismail isiza ama-Proteas women agcine i-T20 series isaphila u-Raj no-Mandhana banqobisa i-India women ngendlela encomekayo i-India inqobe kumdlalo wokuqala we-T20 Ama-Proteas women azimisele ngokubuya Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas Women’s ODI ne-T20 bedlalela ekhaya ne-India i-CSA ihalalisela u-Van Niekerk no-Khuzwayo ngokuthola ama-SRSA Awards